Waxyaabaha Sababa in Naasaha Ay Dhacaan & Sida Looga Hortago - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Waxyaabaha Sababa in Naasaha Ay Dhacaan & Sida Looga Hortago
Dhcitaanka naasaha waa kuwo si guud u heysta haween farabadan, waxaa jira haween farabadan oo waayay adeeggii naasaha.
Waxaa jira waxyaabo sababa intabadan oo keena in ay jilcaan naasaha haweenka amaba ay dhacaan oo intooda badan ay haweenka ku dhaqaaqaan.
Marka, maxay tahay waxyaabaha ugu badan ee sababa jileeca naashaa ma dhicitaankooda ?
Markii aad caatada ka gudubtid, jileec iyo dhicidda naasha markaas ayuu koow kuu yahay, marka ay haweeney cayisho meel walba oo jirka ah ayay ka cayishaa oo ay ku jiraan naasaha sidaa darteed marka ay haweeneyda isku daydo inay cayilka iska baabi’iso sidoo kale waxaa isku soo aruura ama isku yimaada meel walaba oo jirkeeda kamid ah oo ay kamid yihiin naasaha waana cayilka waxa intabadan haween badan naasaha ka jilciyay, marka iska eeg cunada aad cuneysid, cayilkana iska jar.
Cabista Sigaarka/ Shiishadda
Cabista sigaarka ama shiishadda waa kuwo la hubo oo si deg deg ah naasha u jilciya ama u rida, sababta way fududahay, sigaarka wuxuu baabi’iyaa burutiinka jirka taasoo jirka u keenta kala daadasho,marka iska dhaaf oo jooji sigaarka caafimaad ahaana kuuma wanaagsana.
Xirashada Rajabeeto qaldan
Xirasho la’aanta rajabeetada waxay keentaa in naasaha ay deg deg u jilcaan oo ay dhacaan maxaa yeelay wax celiya ama adkeeya ama taageero ma heystaan, waxay weyn karaan dabacsanaan iyagoo noqonaya kuwo aanan adeeg lahayn.
Sidoo kale isticmaalka rajabeeto walba ama cabir qalad ah way xuntahay maadaama aysan la ekeyn ama taageeradii loo baahnaa aysan sii Karin naasaha sidaa darteed mar kasta xiro cabirkaaga saxda ah haddii aadan aqoon weydii dadka ka ganacsada.
Jird dhis la’aan
Jir dhiska wuxuu adkeeyaa jirka awood ayuuna u yeelaa,marka aadan aalaminteyn waxaad Qatar ugu jirtaa xanuuno waxaana dhacaya naasahaaga marka iskana ilaali jird his xad dhaaf ah oo wax yar oo saaacad oo kale ah ayaa kugu filan.
Jir adag hadaad aragtid waa mid qoyan, naasaha waxay u baahanyihiin inay noqdaan kuwo caafimaad qaba isla markaana biyo kufilan hela si ay adeegooda ugu taagnaadaan oo aysan u jilcin.
Haddii aad isticmaashid kareeman, ha hilmaamin naasaha iyo meelaha kale ee u dhow dhabtaada, had iyo jeerna cab biyo badan.
Haweeney Sabab Yaab Leh Xubinta Taranka Uga Jartay Ninkeeda Oo Hurdaya
Ma Jirto Haweeney Uur Leh Oo Rabta Inay Afartaan Arimood Maqasho
Sida Lagu Ogaado Haddii Uu Qof Iska Kaa Xiray WhatsApp (BLOCK)
3 reasons why your partner is acting weird
XIRIIRKA: 3 Siyaabood oo aad ku muujin karto inaad tahay qof aanan isla weyneyn
3 Siyaabood oo la isku xasuusiyo inaad qiimo leedahay (Waligaa ha niyad jabin)
3 Sirood Oo Guurka Leeyahay Oo Ay Tahay Inaadan La Wadaagin Cid Kale (Ilaali Guurkaaga)
Doctor And Nurse Wed In Hostpital Where They Work
Simple ways to trigger love through words
Top Three Most Attractive Shoes For Men That Women Love to Wear
Bugzy Malone ‘Lucky To Be Alive’ After Quad Biking Accident